Vaovao - Ahoana ny fampiasana Syringe Insulin sy ny fitandremana
Ahoana ny fampiasana syringe insuline sy ny fitandremana
Tandremo amin'ny fampiasanainsuline syringes:
(1) Raha manindrona insuline intermediate-acting na long-acting, dia apetraho eo amin’ny felatananao ny vial, tazony amin’ny tanana roa ilay vial, ary ahodiho im-polo eo ho eo ny vilia mba hampifangaroana tanteraka ny rano ao anaty vial.
(2) Alohan'ny tsindronainsuline, sterilize ny stopper amin'ny ethanol landihazo baolina.
(3) Mampiasà asyringemba hisintona rivotra mitovy amin'ny tavoahangy amin'ny insuline ilaina.
(4) Atsipazo amin'ny tanana havia ilay tavoahangy ary esory amin'ny tanana havanana ny habetsahan'ny insuline ilaina.
(5) Rehefa mampifangaro insuline roa amin'ny tenanao manokana ianao, dia tsy maintsy manao insuline fohy miasa aloha ianao, ary avy eo manao insuline miasa mpanelanelana na maharitra.Raha mampifangaro ny insuline intermediate-acting na long-acting amin'ny insuline fohy ianao, dia tsy hampiasaina intsony ity tavoahangy insuline ity.
(6) Esory ny rivotra ao amin'nysyringe.
(7) Rehefa avy nisafidy ny toerana tsindrona, disinfect ny hoditra amin'ny landihazo ethanol baolina.
(8) Rehefa avy maina ny ethanol dia tetehina amin'ny ankihibe, fanondro ary rantsantanana afovoany ny hoditry ny toerana misy tsindrona, ary tsindrona haingana amin'ny antsasany ny toerana misy tsindrona.fanjaitraamin'ny zoro 45° amin'ny tanana ilany, tsindrona ny fanafody misy ranon-javatra, ary avy eo atokàny ny fikitihana.Aorian'ny fanesorana ny hoditra dia mijanona eo ambanin'ny hoditra mandritra ny 10 segondra ny fanjaitra ary alaina avy eo.
(9) Tsindrio amin'ny baolina landihazo maina, aza manotra ny toerana misy tsindrona.
1. Ny fanaraha-maso manara-penitra nytsindronaNy tranonkala dia ahitana ireto teboka telo manaraka ireto:
(1) Fidio ny toerana fanindronana mifanaraka amin'ny karazana insuline ampiasaina.Ny toerana fanindronana samihafa dia mitroka insuline amin'ny hafainganam-pandeha samihafa, ka ny kibo no haingana indrindra, arahin'ny sandry ambony, ny feny ary ny vodiny.Ho an'ny hetsika fohy na hainganainsulinevoatsindrona amin`ny sakafo, dia tsara indrindra ny mifidy ny kibo;ho an'ny insuline antonony sy maharitra dia tsara ny misafidy ny vodiny na fe.Rehefa mampiasa insuline efa voafangaro dia tsindrona ao amin'ny kibo alohan'ny sakafo maraina, ary matetika amin'ny feny na vodiny amin'ny alina mba hisorohana ny hypoglycemia.
(2) Jereo tsy tapaka ny toerana misy tsindrona, ary ialao ny fahaketrahana amin'ny hoditra, ny tsy fahampian-tsakafo, ny ecchymosis, ary ny aretina mandritra ny tsindrona.
(3) Ahodina tsy tapaka ny toerana misy tsindrona, ary tsindrona amin'ny fotoana mitovy isan'andro.Ny teboka tsirairay dia tokony ho 1 sm farafahakeliny amin'ny toerana fanindronana farany.Ahodina isan-kerinandro ny toerana fanindronana havia sy havanana mba tsy hiverenan'io tsindrona io ao anatin'ny 1 volana.teboka.
Ny fanjaitra ho an'nytsindrona insulinefampiasa indray mandeha ny pen.Rehefa vita ny tsindrona dia tokony hesorina avy hatrany ao amin'ny penina tsindrona ny fanjaitra, ary ny satroka fanjaitra ivelany dia tokony hapetraka ary ariana mba hisorohana ny rivotra na ny loto hafa tsy hiditra ao amin'ny cartridge insuline.misy fiantraikany amin'ny fahamarinan'ny fatra voatsindrona.
Raha mitady syringe insuline ianao dia mifandraisa aminay:
Fotoana fandefasana: May-26-2022